Qaab-dhismeedka Jidhka iyo Daaqa Xoolaha |
Qaab dhismeedka jidhka xoolaha waxa uu ka kooban yahay xubno kala duwan oo isku tegay sida, beerka, wadnaha, xididada dhiigga qaada iyo caloosha , kuwaas oo sameeya hab-dhisyo kala duwan sida, hab-dhiska dheef-shiidka, hab-dhiska dhiigga, hab-dhiska dareen-wadka iyo hab-dhiska neef-mareenka.
Xubno kasta oo isku dhisan isla markaana qabta shaqo isku mid ah waxa loo yaqaanaa hab-dhis.
Sidaas daraadeed, qaab-dhismeedka jidkha xooluhu waxa uu ka kooban yahay 11 hab-dhis oo kala duwan, habdhis kastaaba waxa uu qabtaa shaqo gaar ah sida hab-dhiska dhiigga wareejiya ama hab-dhiska cuntada dheef-shiida.
Guud ahaan wadashaqaynta ka dhaxaysa hab-dhisyada jidhku waxa ay suurto gelisaa in uu samaysmo xayawaan nool oo shaqaynaya, taas bedelkeeda haddii mid ka mid ah hab-dhisyada jidhka neefku shaqada joojiyo ama xanuun soo gaadho waxa meesha ka baxaysa nolosha neefka oo dhan.
Habdhiska dhiiiggu waa mid ka mid ah hab-dhisyada ugu muhiimsan ee uu jidhku leeyahay, waxa uu ka kooban yahay xubnaha kala ah, wadnaha iyo xididada dhiigga qaada. Dhiiggu waa dareeraha ugu muhiimsan ee jidhku leeyahay, waxa uu qaadaa cuntada, biyaha, dawooyinka, oxygen-ta iyo wasakhaha kale ee jidhka laga saarayo. Dhiiggu waxa uu maraa xubin kasta oo jidhka neefka ka mid ah, haddii xubin ka mid ah jidhka uu ka xidhmo socodka dhiiggu ma sii noolaato xubintaasi, markaas waad garan kartaa qiimaha uu dhiiggu u leeyahay jidhka noolaha.
Hab-dhiska dheef-shiidku waa hab-dhiska u suurto geliya noolaha in uu qaato cunto iyo biyo, isla markaana uu jidhku u bedelo mid uu faa’ido ka heli karo, kalana bixi karo wixiii nafaqo ah ee ku jirta, wixii hadhaa iyo xashiish ahna laga saaro jidhka. Afka, ilkaha, carrabka, hunguriga, caloosha, mindhicirada,beerka iyo dabada laga saaro saxarada ayaa wada shaqyntooda loo yaqaanaa hab-dhiska dheef-shiidka.
Lafuhu waxay door wayn ka ciyaaraan socodka, qaab-dhismeedka muuqda ee jidhka iyo samaysanka macdanta kaalshiyamta iyo unugyada difaaca jidhka si uu neefku adkaysi ugu yeesho cudur dhaliyayaasha iyo waxyaabaha kale ee xanuunada keena.
Hab-dhiskani waxa uu ka kooban yahay xubnaha kala ah, lafaha, carjawda, murqaha iyo seedaha jidhka xoolaha rabbi ku sameeyay.
Neefta ama oxygen-tu waa mid ka mid ah hawooyinka ugu qaalisan ee aanu neefku la’aantood noolaan Karin, haddaba si taas heliddeeda loo suurto geliyo waxa uu rabbi jidhka xayawaanka ku abuuray xubno u sahlaya soo dabidda iyo isku bedelka hawooyinkaas kala duwan, afka, sanka, hunguri cadka iyo sambabadu waa xubno wada shaqeeya isla markaana u soo daba jidhka oxygen-ta kana saara hawooyinka qashinka ah sida kaarboon-dioxide-ka.
Hab-dhiska taranka iyo kaadi-mareenka
Xayawaanku haddii aanay tarmaynin ma ay sii jireen muddo dheer, sidaas daraadeedna waxa rabbi ku abuuray xubno ay ilmo ku beeri karaan, kana dhali karaan isla markaana ku quudin karaan dhalmada ka dib. Xubnaha ugu muhiimsan hab-dhiskan taranka waxa ka mid ah, ilmo-galeenka, ugxan sidaha, xiniinyaha iyo labada xubnood ee ay galmadu ka dhacdo. Sidaas si la mid ah hab-dhiskan waxa ay isku dhaw yihiin xubnaha qaarna ay wadaagaan hab-dhiska kaadi-mareenka oo ah qaab qashinka looga saaro jidhka iyada oo dareere ahaan looga saarayo (kaadi). Xubnaha ugu muhiisanna waxa ka mid ah keliyaha, kaadi haysta iyo xubnihii kal ee aynu hore u soo xusnay.
Dareenka iyo farriimaha maskaxda laga diraa waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee suurto geliya nolosha xayawaanka. Maskaxduna waa meesha laga hago dhamaan hawlaha ka dhex dhacaya jidhka, hadii dareenka ama garashadu xayawaanka ka luntana ma jirto wax kale oo si sax ah u soconaya. Maskaxda, xangullaha, iyo neerfayaasha mara dhamaan qaybaha jidhka ayaa la isku yidhaaahdaa hab-dhiska dareen-wadka.
Daaqa ama calafka xoolaha
Daaqa marka aynu leenahay waxa aynu ka hadlaynaa wax kasta oo ay xooluhu cunto ahaan u adeegsan karaan. Daaqa ama calafku waxa uu xoolaha u leeyahay faa’idooyin badan sida,
· in ay ka helaan tamar
· in aydib ugu dhisaan unugyada jidhkooda ee ka luma.
· in ay wax soo-saar u adeegsadaan.
· in ay noqdaan kuwo qooqa oo wax dhali kara
· in ay kayd ka helaan (Naaxaan) calafka.
· iyo in ay macdano iyo nafaqooyin uu jidhkoodu u baahan yahay ka dheefaan.
Haddaba waxa muhiim ah marka aynu ka hadlayno calafka xoolaha waxa jira shan ama lix qaybood oo uu ka kooban yahay calafku, oo ay muhiim tahay xoolaha in loo dhamaystiro dhamaan qaybaha kala duwan ee calafku leeyahay, waxaana ka mid ah,
– iyo biyo
Waxaana muhiim ah in loogu dedaalo xooluhu in ay helaan calaf ka kooban dhamaan qaybahan oo dhan, si ay u soo saaraan wax soo-saar tayo leh.
Tags: Qaab-dhismeedka Jidhka Xoolaha
Next post Wax Soo-saarka Xoolaha
Previous post Xisaabinta Ilkaha Neefka iyo Da’da